कम्प्युटर तथा मोबाइल चलाउनेको आँखामा देखिने ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ के हो? – Wire Nepal
कम्प्युटर तथा मोबाइल चलाउनेको आँखामा देखिने ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ के हो?
डा. पुष्प पौडेल
 नियमित रुपमा धमिलो दृष्टि हुनु।
 कम्प्युटरमा धेरै समय नजिकको काम गरिसकेपछि तुरुन्त टाढाको वस्तु देख्नमा कष्ट पर्नु।
 वस्तु देख्ने कार्यमा ढिलाइ हुनु। एक वस्तुको दृश्यमा दुई÷तीन वस्तु देखिनु।
 आवधिक रुपमा नजिक र टाढाको वस्तु देख्नमा कठिनाइ पर्नु।
 धेरैबेर कम्प्युटरमा काम गरिसकेपछि आँखाबाट आँसु आउनु।
 आँखामा सुख्खा महसुस हुनु, आँखा बिजाउनु।
– आँखाको थकावटको कारणले गर्दा टाउको दुख्नु, भारी महसुुस हुनु।
– विद्युतीय उपकरणबाट निस्कने उज्यालो प्रकाश सहन नसक्ने हुनु।
 घाँटी तथा गर्दनको मांसपेशीमा दुखाइ हुनु।
 शारीरिक थकावट, जकडाहट तथा तथा तनावपूर्ण समय व्यतित हुनु।
 झर्काे लाग्नु, आत्मविश्वासमा कमी आउनु, बारम्बार कार्यक्षेत्रमा गल्ती दोहोरिनु।
 कार्यभार बढ्दै जानु तथा त्यसबाट पर्ने मनोसामाजिक र आर्थिक समस्या।
अवस्थाअनुसार रोगको निदान
प्रथम चरण : बिरामीको दृष्टि परीक्षण तथा दृष्टि वातावरणको मूल्यांकन
 बिरामीको इतिवृत्ति
 बिरामीको दृष्टि परीक्षण
 प्रबल आँखा परीक्षण
 आँखामा आएको चिह्नको परीक्षण
 गतिशील दृष्टि परीक्षण
 आँखाको रङ छुट्याउने शक्तिको परीक्षण
 आँखाको ढकनी खोल्ने, चिम्लिने दरको परीक्षण
 आँखा सुख्खा भए नभएको परीक्षण
– सकभर मोबाइल, कम्प्युटर र अन्य डिजिटल स्क्रिनको लतबाट टाढा रहने।
कम्प्युटरमा काम गर्दा दुई घोडा र बस्ने आसनबीचको दूरी कम्तीमा पनि ६ इन्च र घोडा नखुम्चाई बस्नुपर्दछ।
आयुर्वेद चिकित्सा :
आयुर्वेद नेत्र विज्ञानमा भ्रुदोष (कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम) रोगको अवस्थानुसार रोग तथा विकारको विश्लेषण गरी शोधन (विजातीय विकारलाई बाहिर ल्याउने उपचार विधि) तथा शमन (शरीरभित्रै विकारलाई नास गर्ने) चिकित्साको वर्णन गरिएको छ। विशेषगरी आँखाको चिकित्सामा क्रियाकल्प पद्धति छ। जसमा :
पिण्डी– गुडुची पत्र तथा घृतकुमारीको गुदीबाट ( औषधीय ड्रेसिङ प्याड) बाट प्रारम्भिक अवस्थामा शीघ्र लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ।
त्यसैगरी रोगको शीघ्रतामा आधारित सर्वांग चिकित्सा पनि गर्न सकिन्छ। स्नेहपान, विरेचन तथा संसर्जन कर्म यसबाट मनोशारीरिक असर कम गर्न सकिन्छ।
षष्टिक शाली पिण्ड स्वेद, शिरोपिचु– बला अश्वगन्धा तैल, मुध्र्नी तैल, शिरोधारा– अश्वगन्धा बला तैल, सर्वाङ्ग अभ्यङ्ग (उपयुक्त दोपविवेचन पश्चात, वाष्प स्वेदबाट गर्दन तथा ढाड दुख्ने (एक्स्ट्रा अकुलर मेनिफेस्टेसन) मा लाभ पुर्‍याउँछ।
PREVIOUS POST Previous post: किन हुन्छ एलर्जी ? के छ उपचार ?
NEXT POST Next post: किन लाग्दैन निद्रा ? कारण के उपचार कसरी गर्ने ?